Lalàna Vaovao Manohintohina ny Famoronana Artistika ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Sandra Abd'Allah-Alvarez Ramírez Nandika (en) i Kristina Edinger, Suzanne Lehn, avylavitra
Voadika ny 31 Aogositra 2018 15:25 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Português, Deutsch, Italiano, Ελληνικά, polski, Español
Sary: Daniella Fernández. Loharano : Ireo Vehivavy Kiobàna Mpakasary, fampiasàna nahazoana alàlana.
Mampanahy be ihany ireo kiobàna mpikatroka ny faneriterena ny fahalalahana maneho hevitra taorian'ny fametrahana ilay didimpanjakana 349, andalana mikendry ny fandrindràna ireo hetsika ara-kolontsaina sy artistika rehetra, hatramin'ny fivarotana boky. Nolaniana tamin'ny Janoary, ary hanomboka hihatra amin'ny Desambra io didimpanjakana io.
Io didimpanjakàna miteraka resabe io dia mitaky amin'ireo artista ny hidirany ho anaty rafi-panjakana ofisialy ho toy ny hany mpiahy azy ireo. Faritan'izy io ihany koa ny hoe sampandraharaha toy inona no mahefa mba hampihatra ilay didimpanjakàna, anisan'izany ireo sazy mety ho azo raha misy tsy fanarahana azy.
Sady koa, efa manomana sazy ara-bola sy fangiazana fitaovana ilay didimpanjakana 349, fakàna ireo fitaovana sy zavatra hafa nampiasaina tamin'ilay hetsika nahitàna ny tsy fanarahana lalàna. Mety hiharan'ny fampitsaharana eo noho eo ireo hetsika artistika raha toa heverina fa nandika lalàna..
Sazian'ilay didimpanjakàna ireo fihetsika izay manohintohina ny ‘fahamendrehan'ny olona’. Izay votoaty rehetra hita ho toy ny manavakavaka foko na fironana ara-pananahana dia hosaziana araka ny lalàna. Hojerena ihany koa ny amin'ireo sary mahery setra.
Nanomboka tamin'ny nivoahany tamin'ny Jolay, marobe ireo kiobàna mpanakanto no nanameloka ankitsirano azy io, indrindra ireo izay mifamatotra aminà tranom-pamokarana tsy miankina sy aminà tetikasa ifandrimbonana, ary koa ireo izay ao anatin'ny fanoherana ny mpitondra amin'izao fotoana. io fepetra vaovao io dia atahoran'ireo tetikasa artistika marobe izay miroborobo amin'izao fotoana izao noho ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fifanomezan-tànana ety anaty tambajotra hoe mety hanelingelina ny ara-bolan-dry zareo.
Iray amin'ireo tohankevitra aroso matetika ny hoe hametra ny fahaizamamorona ananan'ireo artista miasa tena io didimpanjakàna io, ary hanokatra varavarana ho an'ny sivana sy ny soridàlan'ny governemanta hanenjika ireo votoaty heveriny ho manohintohina ny mpitondra.
Misy fanentanana isankarazany natao hanoherana ilay didimpanjakàna 349, niara-dàlana tamin'ireo adihevitra momba ilay tetikasa hanaovana lalam-panorenana vaovao ho an'i Kiobà. Saingy ho an'ny maro, namily ny saina tsy hifantoka amin'ilay didimpanjakàna ireny adihevitra ireny.
Fanentanana iray miavaka ilay nomena anarana hoe Artistas Cubanxs en Contra del Decreto 349 (Ireo kiobàna mpanakanto manohitra ny didimpanjakàna 349), finiavana iray avy aminà vondrona manampahaizana, mpanakanto ary mpikatroka, miaraka amin'ilay vehivavy mpahay tantaran'ny zavakanto Yanelys Nuñez, ilay mpanakanto ho an'ny haijery Luis Manuel Otero Alcántara, ilay poeta Amaury Pacheco ary ilay mpiangaly rap David D'Omni. (Amaury Pacheco sy David koa samy mpikambana ao anatin'ilay tetikasa Omni-Zonafranca.)
Sonia 10.000 takian'ny lalàm-panorenana amin'izao mba hahafahana miverina mandinika lalàna iray no katsahan'ilay fanentanana ho azo.
Mandritra izany, niditra tamin'ny adihevitra ilay sehatra fikatrohana Avaaz, niaraka tamin'ny fanangonantsonia iray sy taratasy misokatra ijerena ny maha-ara-drariny ilay didimpanjakàna. Lazain'ilay taratasy fa manahy izy ho an'ny hoavin'ny taokanto sy ny kolontsaina ao Kiobà raha toa ka ireo sampandraharaham-panjakana irery ihany no hanana fahafahana hanome ny fanomezandàlana hanaovana hetsika artistika sy hisafidy izay afaka mamatsy vola azy ireny:
Ankehitriny, loharano vaovao avy amin'ireo namana ho fanohanana an'ireo tetikasa artistika no omen'ny rafitra crowdfunding (fanangonambola avy eny ifotony). […] Ny hoe misy kiobàna iray mpanakanto mikatsaka famatsiambola ho an'ny asa famoronany, amin'ny herin'ny tenany, tsy azo ilazàna azy ho mpanohitra velively — an-tapitrisa ny olona erantany no misitraka ireo teknolojia vaovao mba hanapariahany ny asany ivelan'ireo sampana ara-kolontsaina efa misy.
Sintonin'ilay taratasy misokatra ny sain'ny rehetra mba handinika ireo fanjavozavon'ny sasantsasany amin'ireo masontsivana apetraky ny lalàna ao amin'ilay didimpanjakàna, toy ny hoe “ireo votoaty [ho] saziana fa maniratsira ny soatoavin'ny lalam-pitondrantena sy ny kolontsaina.” Nalefa ho an'ny filoham-pirenena kiobàna, Miguel Díaz-Canel, sy ho an'ilay minisitra vaovao misahana ny kolontsaina, Alpidio Alonso, ary ireo artista sy ireo nahita fianarana no nanao sonia ilay taratasy, toa an'i Tania Bruguera, Laritza Diversent, Coco Fusco, Yanelys Nuñez sy Enrique del Risco.
Ireo ahiahy hamafisin'ilay taratasy koa dia nozarain'ny Cubalex, fikambanana iray mpiaro ny zo :
Ireo artista miasa tena na tsy manana fifamatorana amin'ireo sampandraharaham-panjakàna na miaraka aminà vondrom-piarahamonina sivily dia ho indroa voahavakavaka satria ny endriny sy ny fomba fanehoany hevitra dia fanoherana no fahitàn'ny Fanjakàna azy, na toy ny endrika fanehoana hevitra politika.
Niteraka fanontaniana marobe ilay didimpanjakàna, teny anivon'ny habaka ara-pinoana izay nisy hetsika artistika natao. Toy izany no nisy tamin'ny Rule of Osha, andianà fombafombam-pandihizana sy mozika izay hita ao anatin'ny Santeria, fivavahana be mpanaraka ao Kiobà.
Mandritra izany fotoana izany, misy fivondronan'ireo mpiangaly Hip-Hop ahitàna ireo artista toa an'i David D'Omni (Omni-Zonafranca), Raudel Collazo avy amin'ny “Escuadrón Patriota” sy ilay mpiangaly gadona rock, Gorki Aguila, avy amin'ny tarika “Porno para Ricardo” namokatra hira vitsivitsy fanoherana ilay didimpanjakàna :
Ny sivanao dia ao anatin'ny fanafoanana ireo kaonseritra izay nalavonao tamin'ny tany.
Tao foana hatramin'izao, tsy nisy nataonao afa-tsy ny nanao izay haha-ara-dalàna azy.
Avy eo izahay ampangainao ho mamadika ny zavakanto ho lasa politika, lazao ahy,
Inona no nataonao fony ianao nametraka azy io tao anaty lalàm-panorenana niaraka tamin'ireo sazy ho an'ny mpanakanto?
Ampy izay ny famoretana izay tsy mitsahatra mihalava ny lisitrany.
Manohana ilay didimpanjakàna, hazavain'i Jorge Angel Hernández ny fomba fijeriny, ao anatin'ny La Jiribilla, gazetiboky iray manohana ny fitondràna:
Ireo fihetska manohitra ilay didimpanjakana 349 dia mifototra, toy ny kisendrasendra, amin'ny fifikirana hanolotra ny ho fisian'ny korontana hoavy vokatry ny sivana sy ny faneriterena, manambara apokalipsa ry zareo ary miaro, tsy dia misy hevi-dalina loatra, ireo loharanom-bola ahafahan-dry zareo miditra amin'ireo haavonà lenta anatin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Nitondra ho amina fifandonana teo amin'ireo artista sy ry zareo manampahefana ny resabe momba ilay didimpanjakàna. Nikarakara kaonseritra roa, ny 11 sy 15 Aogositra ireo Artistas Cubanxs en Contra del Decreto 349 (Ireo kiobàna mpanakanto manohitra ny didimpanjakàna 349), mba hampahafantarana ny daholobe ny hetsika ataon'izy ireo hanoherana ilay didmpanjakana, saingy nofoanan'ny polisim-pirenena revolisionera ilay hetsika, ary maro ireo artista no nosamboriny. Voarakitr'i Diario de Cuba ireo fisamborana ary napetrany ety anaty tambajotra, ao amin'ny fantsony YouTube :